Vaovao - Ahoana no hahatafavoaka ny e-varotra ery amin'ny sisin-tany eo ambanin'ny valanaretina?
Toeram-pivarotana toetrandro miloko
Toeram-pivarotana toetrandro marobe
Toeram-piantsonan'ny toetrandro Pro
Station Thermo-Hygro tsy misy tariby
Thermometer mahitsy mahitsy
Tombontsoa ho an'ny orinasa
Ahoana no hahatafavoaka ny e-commerce cross-border ao anatin'ny valanaretina?
Vao tsy ela akory izay, ny vaovao momba ny "Globalegrow E-commerce dia napetraka noho ny fatiantoka sy ny fandaminana indray" nipoitra tamin'ny fikarohana tao amin'ny Internet. Antony iray nahasarika ny sain'ny olona ity raharaha ity satria Globalegrow dia zanaky ny "A-share e-commerce e-commerce voalohany voatanisa" -KJT. Ny totalin'ny tsenan'ny orinasan-dray aman-dreny dia efa ho 40 lavitrisa, ary ny vola niditra dia 20 miliara. Ankoatr'izay, tao anatin'ny roa taona lasa, ny valan'aretina dia nampiroborobo ny fifanakalozana an-tserasera ary koa nanararaotra ny e-varotra amin'ny sisintany mba hanadio ny tahiry taloha. Fa maninona no nianjera i Globalegrow, niaraka tamin'ny halo an'ny "tahiry voalohany amin'ny e-commerce cross-border"?
Globalegrow dia anaty krizy trosa!
Ny tatitra voalohany momba ny "krizy lalina momba ny trosa Globalegrow" dia tamin'ny volana septambra 2020. Tsy vitan'ny fampahalalam-baovao noho ny fihazonana trosa miaraka amin'ireo mpamatsy fa tafiditra ihany koa amin'ny fifanolanana marobe amin'ny fifanarahana, izay misy ifandraisany amin'ny tsy fanefan-trosa. .
Tamin'ny taona 2020, nanjary maika ny olan'ny trosa. Nilaza i KJT, fa hamahana ny olan'ny filàna renivohitra, ny orinasa dia niezaka nanangona vola tamin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany toy ny famoahana trosan'ny orinasa, findramam-bola, indram-bolan'ny tompon-trosa ary fivarotana fananana.
Ny zavatra manaitra indrindra ho an'ny indostria dia ny tamin'ny 24 martsa 2021, ny KJT dia nanambara ny fivarotana 100% an'ny zanany vavy, Patozon, miaraka amin'ny vidiny mitentina 2,02 miliara yuan ho an'ny famindrana ny fananana ifotony.
Ny olan'ny asa mitohy dia nahatonga ny KJT hitafy ny satroka ST (specialtreatment) tamin'ny 7 Mey tamin'ity taona ity. Mandritra izany fotoana izany dia niaina horohoron-tany koa ny KJT.
Araka ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety, ny mpiasa iray ao amin'ny Globalegrow dia nanambara fa "Globalegrow dia manana mpamatsy mihoatra ny 3.000, manodidina ny 450 tapitrisa yuan ny mpamatsy, ary manodidina ny 300 tapitrisa yuan no trosaina amin'ny logistika, izay mitentina 700 tapitrisa yuan."
Ahoana no nahatonga an'izany? Nankaiza ny vola?
1. Fanazavana ny Globalegrow
Mikasika ny olan'ny famatsiam-bola dia nanambara ny olona iray ao amin'ny Globalegrow fa misy lafiny telo lehibe. Ny iray dia nanomboka tamin'ny taona 2019, nanomboka nanangona fampindramam-bola marobe ny banky, izay nitarika mivantana ny olana ara-bola an'ny Globalegrow; ny faharoa dia ny firoboroboan'ny orinasan'ny orinasa haingana loatra, izay nahatonga ny volan'ny orinasa tsy ampy miasa; fahatelo, ny fihanaky ny valan'aretina dia nitondra fitaomana lehibe sy tsindry mafy teo amin'ny indostria sy ny rojom-panomezana.
2. Fanambarana nataon'ireo mpiasa taloha tao amin'ny Globalegrow
Mpiasa iray taloha tao amin'ny Globalegrow dia mino fa mbola misy fotoana mety hiverenan'ny KJT, raha toa ka tsy maintsy mivaha ny korontana amin'ny fitantanana anatiny. "Nisedra olana rehetra i Sailvan, tapaka ny vola renivohitra, nandà tsy hanome azy ireo ny mpamatsy, ary maimbo ny laza rehetra. Ankehitriny dia tafaverina amin'ny laoniny ny laza. Globalegrow dia tsy maintsy miara-miasa."
3. Fanadihadiana momba ny ao anatiny
Mpampianatra e-commerce miampita sisintany no mino fa ny olana dia ny Globalegrow manana vokatra mahazatra be loatra sy lisitra be dia be. Tany am-boalohany dia nanao finday ny Globalegrow, izay vokatra mahazatra mahazatra. Xiaomi sy Huawei dia manana tsena any ivelany ary fantsom-barotra mivantana. Farafaharatsiny mba tsy hivoahana haingana toy izao ny fikorianan'ny vola. Globalegrow dia tsy maintsy mandoa vola alohan'ny hividianana ny lisitra. Fivarotana miadana, io daholo ny vidiny, ary vidiny mazava ny finday, ary mety tsy voatery hanana tombony ny fivarotana any ivelany.
Ny fiantraikan'ny tsena any ivelany any ambanin'ny valanaretina dia mety ho mafy kokoa noho ny nantenaintsika! Na ny rojo renivohitra, ny fitantanana anatiny na ny safidin'ny sku. Ny rohy rehetra dia afaka mamaritra ny fiainana na fahafatesan'ny orinasa iray. Miara-miaina ao anaty e-varotra Cross-border ny vintana sy ny fanamby ary mila raisina tsara ny dingana rehetra!
Fotoana fandefasana: Jun-23-2021
Inona no fiantraikan'ny toetrandro amintsika
Emate dia hanatrika ny 2021 China Cross-Border E-Commerce Trade Fair amin'ny Sep.24-26
Torohevitra hialana amin'ny loza aorian'ny oram-baratra sy tondra-drano!
fifandraisana amin'ny birao